Mpamatsy milina fanamainam-bozaka rotary voajanahary sy mpiorina | YiZheng
Inona no masinina fanamainana varingarin'ny Rotary tokana?
ny Masinina fanamainana varingarina tokana Rotary dia milina famokarana lehibe ampiasaina hanamainana ny zezika zezika amin'ny indostrian'ny fanaovana zezika. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana ilaina. nyMasinina fanamainana varingarina tokana Rotary dia ny fanamaina sombina zezika biolojika misy rano 50% ~ 55% aorian'ny fametahana ny rano ≦ 30% hihaona amin'ny fenitry ny zezika organika. Rehefa ampiasaina amin'ny fitehirizana maharitra na ho akora ilaina amin'ny fanodinana bebe kokoa dia tsy maintsy ≦ 13% ny hamandoana.
Ampiasaina ny masinina Rotary Single Cylinder?
Masinina fanamainana varingarina tokana Rotary dia be mpampiasa amin'ny fanamaina vatosokay, vovoka arintany, potipoti-javatra, tanimanga, sns. Ny milina fanamainana dia azo ampiasaina amin'ny akora fananganana, metalyurgie, simika ary simenitra.
Fitsipi-piasan'ny Rotary Single Cylinder Machine
Ireo fitaovana dia alefa any amin'ny hopper an'ny Masinina fanamainana varingarina tokana Rotary amin'ny alàlan'ny conveyor fehikibo na ascenseur siny. Ny barika dia apetraka amin'ny slope mankany amin'ny tsipika marindrano. Ny fitaovana dia miditra ao amin'ny barika avy any amin'ny lafiny avo kokoa, ary ny rivotra mafana kosa dia miditra ao amin'ny barika avy amin'ny ilany ambany, ny fitaovana sy ny rivotra mafana mifangaro. Ny fitaovana dia mankany amin'ny ilany ambany amin'ny hery misintona rehefa mihodina ny barika. Ny ascenseur amin'ny lafiny anatiny amin'ny barika fampiakarana barika dia miakatra sy midina mba hampifangaroina tanteraka ny fitaovana sy ny rivotra mafana. Ka nohatsaraina ny fahombiazan'ny fanamainana.
Inona avy ireo fiasa amin'ny Rotary Single Cylinder Machine?
* Firafitra mirindra, fanamboarana tena tsara, famokarana avo, fanjifana ambany, toekarena sy tontolo iainana sns.
* Ny firafitra anatiny manokana an'ny Rotary Machine fanamainana dia miantoka ireo fitaovana mando izay tsy hanakana sy hifikitra amin'ilay Masinina fanamainana.
* Ny milina fanamainana Rotary dia afaka manohitra ny hafanana avo mba hahafahany manamaina haingana ny fitaovana ary manana fahaiza-manao lehibe.
* Milina fanamainana Rotary dia mora miasa sy mitazona.
* Ny milina fanamainana Rotary dia afaka mampiasa arina, solika, gazy, biomassa ho solika.
Fampisehoana horonantsary Rotary Single Cylinder
Safidy maodely fanamainana milina fanamainana volo Rotary
Ity andiany an'ny Masinina fanamainana varingarina tokana Rotary manana modely isan-karazany, izay azo fidina arakaraka ny tena fivoahana, na namboarina.
Ny masontsivana teknika lehibe dia aseho amin'ity tabilao manaraka ity:
Teo aloha: Mixer zezika mitsangana
Manaraka: Masinina fanamainana Drum Rotary